Dowladda oo sheegtay in amniga Mandera uu yahay mid sugan | Star FM
Home Wararka Kenya Dowladda oo sheegtay in amniga Mandera uu yahay mid sugan
Dowladda oo sheegtay in amniga Mandera uu yahay mid sugan
Afhayeenka dowladda dhexe Mr. Cyrus Oguna oo maanta shir jaraaid qabtay ayaa sheegay in amniga ismaamulka Mandera uu yahay mid sugan ka dib dagaalladii dhawaan saameeyay degmada Beledxaawo oo Mandera daris la ah.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in heshiiskii Geneva Convention uu dhigaya in hadii iskudhac uu yimaado ka dibna dhaawac ka dhasho in la doonayo in ciidamada dhaawacmay la daaweeyo xita hadii ay xadka dal kale oo heshiiskan saxiixay gudbaan.
Mr. Oguna ayaa carrabka ku adkeeyay in maadaama Kenya ay heshiiskaas saxiixday dhaawaca ka dhashay dagaalkii Beledxaawo lagu daaweynaya xarumaha caafimaad ee Mandera.
Waxaa uu sheegay in ka dowlad ahaan Kenya aynan diyaar u ahayn in Kenya ay qayb ku lahaato arrimaha siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya.
Hoggaanka Soomaaliya ayuu Cyrus Oguna kaga digay in sida uu hadalka u dhigay uu Kenya ku soo daro ama ku magac dhawo arrimo aan khuseyn.
Previous articleDHAGEYSO:Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dab saameeyay xarunta golaha hoose ee Garissa
Next articleDHAGEYSO:Xaafad ka tirsan Mandera oo biyo la’aan laga soo sheegaya